आजबाट लागू भयो,भारत र नेपाल प्रेवेसमा पूर्ण रोक ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आजबाट लागू भयो,भारत र नेपाल प्रेवेसमा पूर्ण रोक !
आजबाट लागू भयो,भारत र नेपाल प्रेवेसमा पूर्ण रोक !
विश्वभर फैलिएको को रोना सं क्रमण भित्रिन नदिन अनेक उपाय अपनाइरहेको सरकारले भारततर्फका नाकाबाट आवतजावत रोक्ने तयारी गरेको छ । कोभिड १९ सं क्रमण विश्वभर फैलिँदै गएपछि चीनतर्फका नेपालसँग जोडिएका नाका बन्द भइसकेका छन् भने सरकारले भारतसँगका नाकाबाट आवतजावत रोक्ने तयारी गरेको छ । तर, भारतबाट हुने अत्यावश्यक सामग्रीको आयात भने रोकिनेछैन ।
हाल भारतसँगका नाकाबाट नेपाली तथा भारतीय नागरिक निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय भारतमा को रोना सं क्रमितको संख्या १ सय ३७ देखिएको छ भने हालसम्म तीन जनाको नि धन भइसकेको छ ।
को रोना भा इरस स ङ्क्रमणको जो खिम हुन नदिन बाँकेको मुख्य नेपाल–भारत सीमानाका जमुनाहमा बुधबारदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्णरुपमा रो क लगाइएको छ । दुवैदेशका सुरक्षार्मीले दुवै देशमा प्रवेश गर्ने ठूला सवारीसाधनदेखि साइकलसम्म सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् । नेपालतर्फ चौलिक्का चोकसम्म मात्र सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको छ । सवारीसाधन सचालनमा रोक लगाए पनि पैदल आवातजावत भने यथावत रहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले भारतबाट घर फर्किने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेखनीय मात्रामा रहेको छन् । त्यस्तै नेपालगञ्जका उद्योगमा आउने कामदारदेखि अन्य नागरिक पैदल आउन बाध्य भएका छन् । यसअघि भारतमा फै लिएको को रोना भा इरस नेपालमा भित्रिन सक्ने आ शङ्कामा जमुनाह नाका बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । यहाँ बसेको नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीको बैठकले बुधबारदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । बिहानैदेखि टेन्ट लगाएर स्वास्थ्यकर्मीले नाकामा प्रवेश गर्ने हरेक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरिरहेका छन् ।
अर्कोतर्प, को रोना भा इरसको कारण बाँकेको व्यापार, व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्जमा आवतजावत गर्नेको सङ्ख्या घटेपछि यहाँको व्यापार, व्यवसाय प्रभावित बनेको हो । मूलतः भारतबाट आउने पर्यटकको आगमन शून्यमा झरेको, आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै घटेको, होटल, रेष्टुराँ र सार्वजनिकस्थलमा मानिसको उपस्थिति पातलिँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले जानकारी दिनुभयो ।कोरोनाका कारण बाँकेको होटल व्यवसायमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । नेपाली तथा विदेशी पर्यटकले चल्दै आएको बाँकेको होटल व्यवसाय सरकारले विदेशीलाई प्रवेश निषेध तथा जिल्लामा कुनै पनि सभा सम्मेलन, कार्यक्रम नगर्नका लागि आग्रह गरेकाले अहिले होटल व्यवसायको कारोवार प्रायःठ प्प जस्तै छ ।
सके धनले नसके स्वच्छ मनले शेयर गरि १४ बर्षीय चेलीको ज्यान बचाउँ
गरिब र असहायका हिरो सोनु सुद हुन् गणेश भगवानका भक्त